Medical team members of the Xiangya Hospital of Central South University gather before setting out for Hubei Province in Changsha, central 四不像心水's Hunan Province, Feb. 7, 2020. The third batch of medical teams comprised of 130 members from the Xiangya Hospital of Central South University set off on Friday to aid the coronavirus control efforts in Hubei. (Xinhua/Chen Zhenhai)
Medical team members of the Xiangya Hospital of Central South University pose for photos before setting out for Hubei Province in Changsha, central 四不像心水's Hunan Province, Feb. 7, 2020. The third batch of medical teams comprised of 130 members from the Xiangya Hospital of Central South University set off on Friday to aid the coronavirus control efforts in Hubei. (Xinhua/Chen Zhenhai)
Medical team members of the Xiangya Hospital of Central South University arrange their luggages before setting out for Hubei Province in Changsha, central 四不像心水's Hunan Province, Feb. 7, 2020. The third batch of medical teams comprised of 130 members from the Xiangya Hospital of Central South University set off on Friday to aid the coronavirus control efforts in Hubei. (Xinhua/Chen Zhenhai)
Medical team members take an oath before leaving for Hubei Province at West 四不像心水 Hospital of Sichuan University in Chengdu, capital of southwest 四不像心水's Sichuan Province, Feb. 7, 2020. A medical team comprised of 131 members left Chengdu for Wuhan on Friday to aid the novel coronavirus control efforts there. (Xinhua/Wang Xi)
Medical team members head to the airport before leaving for Hubei Province at West 四不像心水 Hospital of Sichuan University in Chengdu, capital of southwest 四不像心水's Sichuan Province, Feb. 7, 2020. A medical team comprised of 131 members left Chengdu for Wuhan on Friday to aid the novel coronavirus control efforts there. (Xinhua/Wang Xi)